Uphika izinkinga eKZN Capital 104 FM | News24
Uphika izinkinga eKZN Capital 104 FM
ISITHOMBE:sithunyelwe Umphathi wesiteshi iKZN Capital 104 FM uMnu Jerry Jones osolwa abasakazi ngokuba ngundlovukayiphikiswa.
UPHIKA eyokuba undlovukayiphikiswa umphathi wesiteshi somphakathi i-KZN Capital 104 FM uJerry Jones, emva kwezinsolo zokuxosha abanye abasakazi ngokungemthetho.
Ngesonto eledlule elinye lamaphephandaba ansukuzonke libike ukuthi uJones uxoshe abasakazi emcimbini wokugubha unyaka lesi siteshi sasungulwa ngoba ebasola ngokuthi bayazitshela.
Kubikwa ukuthi ngaphambi kokuxoshwa kwalaba basakazi bekukhona ukungenami obekukhona kubo, ngoba bekhala ngesandla sakhe sensimbi.
Ezinye izinto ababezibala ukushintshwa ezinhlelweni kwabasakazi ngaphandle kokuthi bahlaliswe phansi, ukuxoshwa ngaphandle kwezizathu nokungatholi ngisho imali yokugibela.
Abanye babasebenzi abangathandanga ukudalulwa bathi isigameko sakamuva sidine nabaningi asebahamba ngenxa yokungenami kulo msakazi. Bathi uma omunye wabasakazi eke wakhombisa ukungahambisani nomphathi, ugcina ngokuthi amshintshe ohlelweni noma amxoshe.
Eziphendulela uJones uthe iningi labasakazi alazi ukuthi iziteshi zomphakathi akukho nzuzo etheni eziyenzayo ukuthi zingakwazi ukukhokhela abasakazi, kuphela nje zibavulela iminyango uma sebefuna ukusebenzela iziteshi ezinkulu.
Uthe: “Uma kukhona engibaxoshile, abayanga ngani kwaCCMA [Commision for Conciliation, Mediation and Arbitratiions] ukuyongivulela icala lokubaxosha ngokungemthetho?
“Akulona iqiniso ukuthi kukhona abasakazi engabaxosha ngenkathi lesi siteshi sigubha unyaka. Sabanga ukuthi angivumelananga nabanye babo ababethi akuhanjwe kuyiwe kwenye indawo yokuzithokozisa eseMbali.
“Besinezintatheli eziningi kodwa ubuthola ukuthi lunye vo udaba lwaseMgungundlovu, idolobha lethu lilikhulu kangaka. Lokho kukodwa bekukhombisa ukuthi kukhona abangafuni ukusebenza.
“Kunabanye engacela ukuthi bashintshwe ezinhlelweni ebebezenza ngoba kuwusiko le misakazo ukuthi kube umkhuba ojwayelekile ukushintshwa kwabasakazi ezinhlelweni, ukuze nalabo abasafuna uqeqesho (interns) bathole ithuba.
“Ngokubashintsha kwami ngizidalele amazinyo abushelelezi.”
Mayelana nezinsolo zokuthi ulala esiteshini nokuthi nendodakazi yakhe nayo ibuye ilale khona uthe lokho kuyamangaza ngoba kukhulunywa ngomsebenzi, hhayi ngempilo yakhe yangasese.
“Bekuba nezikhathi lapho umsakazi ethumela umyalezo ebusuku athi akasezuphumelela ohlelweni, njengomphathi siteshi kumele ngivale leso sikhala.”
UJones uphethe ngokuthi laba abahambile bahambe sebezoqala ukuthola imali encanyana ekupheleni kuka Ntulikazi (July)